आज मिति २०७७ चैत्र १७ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नु’होस्
Homeराशिफलआज मिति २०७७ चैत्र १७ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नु’होस्
March 30, 2021 admin राशिफल 4427
पारीवारिक झोर झ’मेलाले सताउनेछ । मनको चन्च’लताले गर्दा कार्य क्षेत्रमा सामान्य ढिलाई हुन सक्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । शारीरिक आलस्यताले स’ताउन सक्नेछ । नयाँ लगानिमा सजग रहनु होला ।
नयाँ कार्य था’लनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । शारीरिक आलस्यले कार्य ढिलाई हुन सक्छ । अरुको बिश्वासमा गरीएका कार्यहरुमा सामान्य झझट पैदा हुन सक्ला । अनायासै यात्राको सम्भाबना रहन सक्नेछ । मान्यजनको साथ सह’योगमा गरीएका कार्य भने सफल रहलान ।
बौधिक ब्यक्ति’त्व सँगको भेटघाटले मन हर्सित तुल्याउला । पारीवारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । आम्दानि क्षेत्र भने मध्यम रहेको छ । भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ । नयाँ कार्यको थाल’निले आम्दानि सबल तुल्याउनेछ ।
पारी’वारिक साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मद्दत पूग्नेछ । परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ । मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । काम कार्यको क्षेत्रमा बिषेश ध्यान दिनु होला । बाणीको चातु’र्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन ।
सामान्य यात्रा हुनसक्ने सम्भा’बना रहेको छ । मित्रजनको साथ सहयोग भरपुर रहनेछ । मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्र भने राम्रो रहेको छ । मान्य जनको साथ सह’योग प्राप्त हुनाले सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भईनेछ ।
खानपानको गड’बढीले स्वास्थमा सामान्य बाधा आउन सक्छ । बोलिको कारण आफन्तजनहरु रुष्ट रहन सक्छन् सजग रहनु होला । दीर्घकालिन फाईदा मुलक काममा लगानि लगाउने राम्रो समय रहेको छ तर तत्कालिक आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । बौधिक क्षे’त्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला ।
साजेदारी काममा हात नहाले कै बेस रहने छ । साधारण चोट पटक लाग्न सक्ने सम्भा’बना रहेको छ । प्रेमी प्रेमीका बिच खट्पट रहन सक्छ । कार्य सम्पादनमा आटँको कमि रहला । ब्यापार ब्यवसायका माध्यम बाट आम्दानीका श्रोत सुदृण बन्नेछ । स’भा सम्मेलन जन्य कार्य सहभागीता मिल्नेछ ।
मित्रजनहरुको लागी सा’धारण खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । खराब संंगतको कारणले सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । ब्यापार ब्यवसायमा सामान्यतय हानि रहन सक्ने छ । कला कौशलको प्रयोगलमा समय ब्यतित रहने योग रहनेछ । नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वा’सघात हुन सक्छ ।
हरकोहिको पुर्ण बिश्वास नर्गनु होला धोका हुन सक्छ । नयाँ कामको क्षेत्रमा ल’गानि नगरेकै बेश हुनेछ । मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । मित्रजन को साथ सहयोय प्राप्त हुनेछ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । यात्रामा साबधानि अप’नाउनु होला ।
मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक सम्ब’न्धमा सुधार आउनेछ । कष्टकर यात्रा रहन सक्छ । शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ । सभा समेलनमा सरीक हुने योग रहेको छ । सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मान’सीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ ।
दाजु भाई तथा मित्र’जनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । यात्राकारक दिन रहेकोछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । गरिरहेको काममा सामान्य झन्जट सहनु पर्ला । लगानिको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने दिन रहेको छ । कुरा काट्ने ब्यक्तिको कमि नरहला । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ ।
मिन राशि (दि’, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि)
शारीरिक अस्वस्थाका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । मान्य जनको साथ सह’योग पुर्ण रुपमा प्राप्त नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । माल सामान को क्षति ब्यहोर्नू पर्ला सजग रहनु होला ।
भाइरल सम्झना शाही एक्कसी रुँ’दै मिडियामा, आखिर के भयो सम्झनालाई – हे’र्नुहोस भिडियो
फालिएका साबुन बटुलेर यसरी बनाउँछिन् नयाँ साबुन (भिडिओ हे’र्नुहोस्)
March 24, 2021 admin राशिफल 3554
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) सामाजिक काम गर्दा ध्यान दिनुहोला प्रति’स्पर्धीहरुले तपार्ईँको साख गि’राउन खोज्नेछन् । खोज तथा अनुशन्धानमा दिईएको समयबाट भनेजस्तो उपलब्धी हा’सिल हुन मुस्किल रहेकोछ । घर जग्गा तथा स्थाई सम्प’तिमा बिवाद आउने योग रहेकोछ भने आमा
असार २५ गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
July 9, 2021 admin राशिफल 3464
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आफन्तजनहरुको साथसह’योगमा अधुराकार्य हरु सम्पादित रहनेछन । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । स्वास्थमा सामान्य सुधारको योग रहनेछ । आम्दानिको क्षेत्र मध्यम रहनेछ ।
आज मिति २०७८ साल जेष्ठ ५ गते बुधबारको राशिफल हे’र्नुहोस
May 19, 2021 admin राशिफल 4345
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) सामाजिक कार्यमा आफु अग्र’सर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरु लाई मिल्नाले सामान्य खि’न्नता बोध हुनेछ । मध्यान पश्चात बौधिक ब्यक्तिहरुका बिचमा आफु कमजोर भएको
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (242006)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229910)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229537)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227911)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226705)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226285)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (196979)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194305)